Nkurɔfo no bɔɔ mpae sɛ Onyankopɔn nsan nnye wɔn
‘Kae nea ato yɛn’ (1)
‘Asɛm ato yɛn; yɛayɛ bɔne’ (16)
‘San fa yɛn bra, O Yehowa (21)
“Ma yɛn nna nyɛ foforo” (21)
5 O Yehowa, kae nea ato yɛn. Hwɛ, na hu yɛn animguase.+ 2 Wɔadan yɛn agyapade ama ahɔho; wɔde yɛn afi ama ananafo.+ 3 Yɛayɛ nnyanka a yenni agya; yɛn maamenom te sɛ akunafo.+ 4 Yɛn ara yɛn nsu a yɛnom mpo, gye sɛ yetua ka,+ na yɛn ankasa anyina a yɛsɔ nso, gye sɛ yɛtɔ. 5 Wɔn a wɔtaa yɛn no aso yɛn kɔn akyi ara ne sa;Yɛabrɛ, nanso wɔmma yennya ahomegye.+ 6 Yɛde yɛn ho ama Egypt+ ne Asiria,+ sɛnea ɛbɛyɛ a yebenya aduan a ɛbɛso yɛn adi. 7 Yɛn agyanom a wɔyɛɛ bɔne no nni hɔ bio, nanso yɛn na yɛso wɔn bɔne. 8 Seesei nkoa na edi yɛn so. Obiara nni hɔ a obegye yɛn afi wɔn nsam. 9 Yɛde yɛn nkwa* to yɛn nsam hwehwɛ aduan,+ sekan a ɛwɔ sare so no nti. 10 Yɛn were adɔ sɛ fononoo, ɔkɔm a ano yɛ hyew no nti.+ 11 Wɔabrɛ Sion mmea ase,* Yuda nkurow mu mmaabun no.+ 12 Wɔkyekyeree adehye nsa sensɛn wɔn,+ na wɔamfa obu amma mpanyimfo.+ 13 Mmerante soa ɔbo a wɔyam so ade,* na mmarimaa hintiw, anyina a ɛsoso wɔn nti. 14 Mpanyimfo nni kurow apon ano bio;+ mmerante agyae wɔn nnwom bɔ.+ 15 Anigye nni yɛn koma mu bio; yɛn asaw adan awerɛhow.+ 16 Ahenkyɛw ayi afi yɛn ti atɔ fam. Asɛm ato yɛn, efisɛ yɛayɛ bɔne! 17 Eyi nti, yɛn koma yare,+Eyi nyinaa nti, yɛn ani so ayɛ kusuu,+ 18 Sion bepɔw a ayɛ amamfo nti.+ Seesei sakraman na ɛnenam so. 19 Na wo Yehowa de, wobɛtena w’ahengua so afebɔɔ. W’ahengua wɔ hɔ fi awo ntoatoaso so kosi awo ntoatoaso so.+ 20 Adɛn nti na wo werɛ afi yɛn afebɔɔ, na woagyaw yɛn hɔ bere tenteenten saa?+ 21 O Yehowa, san fa yɛn bra wo nkyɛn, na yɛbɛsan aba dodo.+ Ma yɛn nna nyɛ foforo sɛ tete no.+ 22 Nanso woapo yɛn koraa. Wo bo afuw yɛn denneennen.+
^ Anaa “Wɔato Sion mmea mmonnaa.”